हिंसाबारे सचेत छैनन्ः अधिकृत तामाङ |
प्रकाशित मिति :2017-03-10 20:51:35
सिरहा जिल्लामा महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनिकरणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाहरु सक्रिय छन् । तर, महिलाहरु हिंसामा पर्ने क्रम राेकिएकाे छैन । यसको कारण र हिंसा पीडित महिलाका लागि महिला बालबालिका कार्यालयले गरिरहेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा जिल्लास्थित महिला बालबालिका कार्यालयका महिला तथा बालबालिका अधिकृत अनिता तामाङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सिरहास्थित महिला बालबालिका कार्यालयका महिला तथा बालबालिका अधिकृत अनिता तामाङ
जिल्लामा महिला हिंसाका घटना अन्य जिल्लामा भन्दा बढी हुने गरेको बताइन्छ । यसको कारण के होला ।
हिंसाका घटना भएका छन् तर, संख्यामा धेरै देखिए पनि यो संख्या हिंसा बढेको भन्दा पनि बाहिर आएको भनेर बुझ्नुपर्छ । संख्यात्मक रुपमा बाहिर आएका घटनालाई हिंसा बढेको रुपमा लिनु गलत हुन्छ । किनकी यसरी बाहिर आउनु पनि सकरात्मक नै छ । हिजो सहेर यातना खपेर बस्थे, तर आज सहनु हँुदैन भन्ने चेतना भइसकेको छ ।
महिला बालबालिका कार्यालयले आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण र लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरणका कार्यक्रम सँगै लगिरहेको छ । यहाँ दाइजो प्रथा छ । दाइजोले बाल विवाहलाई बढावा दिइरहेको अवस्था छ । घुम्टो प्रथाका कारण हुने हिंसा त्यस्तै छ । छोरालाई एक किसिमको शिक्षा, छोरीलाई अर्कै शिक्षा छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका कारण हिंसाका घटना बढेका छन् । महिलामा शिक्षाको अभाव छ । चरम गरिबी छ । गुणस्तरीय शिक्षा छैन । किशारीहरु बीचमै स्कुल छोड्न बाध्य छन् । हिंसा गाउँ र शहर दुवैमा भएपनि ग्रामीण महिलाहरु जो आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रुपमा कमजोर हुनुहुन्छ, वहाँहरु बढी हिंसामा परी रहनु भएको छ ।
तर, हिंसाका घटनामा परिवर्तन नआएको भने होइन, हिंसाको स्वरुप नै व्यापक र वृहत भएर त्यस्तो नदेखिएको हो । हाम्रा सामाजिक मुल्य मान्यता समुदाय, सामाजिक बनोट पनि सिरहाको परिप्रेक्ष्यमा फरक छ । एकै जातजातिको बाहुल्य भएका गाउँहरु छन् तर, परिवर्तन विस्तारै देखिँदै छ । हामीले परिवर्तन साना साना कुराबाट हेर्नुपर्छ ।
जस्तो, हिजोसम्म घुम्टोले आधा शरीर ढाकेर बाहिरी दुनियाँ नै नहेर्ने महिला अहिले पुरुषसँगै बसेर छलफल गर्छन् । महिलाहरु आफ्ना कामहरु लिएर सरकारी कार्यालय आइरहेका छन् । हिंसा सहनुहुन्न भनेर न्यायिक निकाय धाउन थालेका छन् । घर परिवारले सजिलै नबनाईदिए महिला आफैं धाएर नागरिकता लिन थालेका छन् । महिला आफैंले आफ्नो पहिचान खोज्न थालेका छन् । यो परिवर्तन होइन र ? यीनै साना–साना कुरा हुन परिवर्तन भनेको ।
धेरै खालको समस्या भएको ठाउँमा हामीले तुरन्तै ठूलो परिवर्तन एकै पटक पाउन सक्दैनौं । हाम्रो उदेश्य महिलालाई आर्थिक रुपले सशक्त बनाउने हो । जब आर्थिक रुपमा सशक्त हुन्छ अथवा महिलाहरु आत्मनिर्भर हुन्छन्, उनीहरु हिंसा सहेर बस्दैनन् ।
हिंसामा परेका महिलाका लागि कार्यालयका कस्ता कार्यक्रम छन् ?
हिंसामा परेका महिलालाई लक्षित वर्ग बनाएर कार्यालयले अति विपन्न, शिक्षा नपाएका, आफैं लगानी गरेर आत्मनिर्भर हुन नसक्ने महिलालाई समूह, समिति र संस्था बनाएर आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरण गरिरहेको छ । हिंसामा परेका, घर परिवारले सहयोग नगरेका, हिंसा विरुद्ध निवेदन दिएपछि फर्केर जाने ठाउँ हुँदैन । त्यसैले उनीहरुको लागि काम गर्न सरकारी निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
तर, सरकारी निकायको पहलबाट मात्र सम्भव छैन । हिंसाको प्रकृति र क्षेत्र वृहत भएकाले स्वयं व्यक्ति, सरकारी, गैरसरकारी निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । हिंसा सहेर बसेका महिलाले म पनि मानव हुँ । म माथि अन्याय भएका कुरा बाहिर ल्याउनु पर्छ । मेरो पनि मानव अधिकार छ भन्ने बुझ्न नसक्दा महिलामाथि हिंसा धेरै भएको छ । आफ्नै श्रीमानले त कुटेको हो नि भनेर चुप लाग्ने ।
कतिपय हिंसा प्रभावित महिलाहरुको कार्यालयसम्म आउने पहुँच छैन । उनीहरुको लागि के काम भइरहेको छ ?
पीडित महिलालाई हाम्रो पहुँचमा ल्याउन हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौं । म एउटा महिला बालबालिका अधिकृतको नाताले हरेक संचारकर्मी, अधिकारकर्मी, गैरसरकारी संस्थाहरुका कार्यक्रमहरुमा जाँदा हाम्रा आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमबारे जानकारी तल्लो तहसम्म पुर्याउनका लागि जानकारी गराउने गरेको छु ।
यसैगरि, कार्यालयका सबै गाविस नगरपालिकामा समूह समितिहरु छन्, त्यहाँबाट जानकारी गराएका छौं । स्थानीय संचार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गरेका छौं । तर, अझै पनि सूचना तल्लो तहमा पुग्न सकेको छैन । यसको पनि कारण छ, शिक्षामा धेरै महिलाको पहुँच छैन ।
यस विषयमा हामी वृहत रुपमा निरन्तर काम गरिरहेका छौं । लैङ्गिक हिंसा निवारणको लागि आर्थिक सहयोगको कुरा गर्दा लैङ्गिक हिंसा कोष अन्तर्गत बीउ पुँजी उपलब्ध गराएर वहाँहरुलाई आत्म निर्भर बनाउने कार्यक्रम छ । यो सहयोगबाट हिंसामा परेका महिला फर्केर घर जान नसके पनि व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्छन् ।
कार्यक्रम लागू भएपछि एकल महिला कोष तरकारी खेती र व्यापार गर्न १० जनालाई बीउ पुँजी उपलब्ध गराएका छौं । त्यसैगरि, तीन जनालाई औषधी खर्च र एक जनालाई यातायात खर्च उपलब्ध गराएका छौं । लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष अन्तर्गत व्यापार, व्यवसाय, तरकारी खेतीका लागि ६ जनालाई बीउ पुँजी तथा सहायता रकम उपलब्ध गराएका छौं । यो कोषबाट सात जना महिलाले औषधी उपचारका लागि आर्थिक सहयोग दिइएको छ ।
समुदायमा हिंसा नै नहोस् भन्ने उदेश्यले निगरानी समूह र समितिहरु मार्फत हामी हरेक गाविस र नगरपालिकामा पुगेका छौं । निगरानी समूहले हिंसा भैहाले गाविस स्तरमा समस्या सम्बोधन गर्ने र सम्बोधन गर्न नसकेका वा नमिल्ने समस्यालाई सम्बन्धित ठाँउमा पठाउने काम गरिरहेको छ । यसले गाविस, नगरपालिकाबाट सिफारिस बनाईदिने, सर्जमिन गरिदिने, हिंसामा परेका महिलालाई प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्याउने काम गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, महिलालाई आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौं । हामीले हाम्रा समूह र समिति मार्फत महिलाहरुलाई विभिन्न सीप, क्षमता र नेतृत्व विकासको तालिम दिएका छौं।
निगरानी समूहले हिंसामा परेका महिलालाई तत्काल दिनुपर्ने सेवा, खाना–खाजा खर्च, आवास खर्च, औषधी उपचार खर्च लगायतका कुराको सिफारिस गरेर पठाउँछन् । यस्तै, समूहमा रहेका महिलालाई साना उद्योगतर्फ अभिपे्ररित गर्न अगरबत्ती, मैनबत्ती, साबुन, सरफ, चुरी लहठी, मुडा बनाउने, ब्यूटीपार्लर जस्ता तालिम प्रदान गरेका छौं । सहकारीका लागि सहयोग गरेका छौ । तरकारी खेती गर्न आर्थिक सहयोग गरेका छौं । यी सबै तल्लो तहका गाविस स्तरमा गरिने कार्यक्रम हुन् ।
तर, कार्यालयका कामहरु त्यति प्रभावकारी हुन सकेका देखिँदैनन् नी !
जसले हिंसा सहेर बसिरहेको छ उसले आफूमाथि हिंसा भइरहेको छ भन्ने नबुझेर र अर्को उनीहरुलाई विकल्प नभएर हो तर, यसो भन्दैमा प्रभावकारिता नै छैन भन्ने होइन । तर, हाम्रो प्रभावकारिता ठूला परियोजनामा छैनन् र शिक्षित अगुवाहरुसँग हामीले काम गर्ने होइन । हामीले समुदायमा सबभन्दा पछाडी परेका, हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउँदा घरबाट बाहिर निकालिएका र जोखिममा परेका महिलाका लागि काम गर्ने हुँदा अपेक्षा गरे जस्तो प्रभावकारिता नहोला तर, परिवर्तन धेरै भएको छ ।
एउटा समुदायमा भएका राम्रा अभ्यासहरु नमुनाको रुपमा अन्य समुदायमा लान मिश्रित समाजको आवश्यकता हुँदो रहेछ । तर, यहाँ त्यस्तो समाज नभएकोले राम्रा अन्य समाजका राम्रा कुराहरु ल्याउन सकिएको छैन । त्यस्तै, स्थानीय महिलाको शिक्षामा पहुँच छैन । यसले गर्दा नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम लैजान समस्या भएको छ ।
सरोकारवाला निकायहरु कसरी बढि प्रभावकारी हुन सक्छन् ?
स्थानीय निकायको हकमा भन्ने हो भने एउटा महिलाले विवाह दर्ता गर्नका लागि सिफारिस लिने ठाँउ गाविस र नगरपालिका हो । महिलाले विवाह दर्ता वा नागरिकता बनाउने जस्ता काम लिएर आएका छन् भने गाविसले सहयोग गर्नुपर्यो । यस्तो काम लिएर आउँदा प्रक्रिया पुगेको छ, छैन के हो बाटो देखाई दिनुपर्छ । प्रशासनिक कामलाई पनि सरल बनाउनुपर्छ।
त्यस्तै, हिंसा न्यूनिकरणका लागि राजनीतिक दलहरुको बढी भूमिका हुन्छ । उनीहरुको सबभन्दा बढी आवाज सुनिन्छ । उहाँहरुले पनि पीडित महिलाको बारेमा बोलिदिनुपर्यो । यस्तो भयो भने महिलालाई जिल्ला सम्म धाईराख्नु पर्दैन, गाउँबाटै समाधान हुन्छ । त्यस्तै छुवाछुत, जातिय विभेद बोक्सी आरोप, महिलामाथि लैङ्गिक विभेद आदि कानुनले वर्जित गरेका कुरा हुन् । यी मिथ्या कुरा हुन् भनेर पैरवी गरिदिनुपर्यो ।
नागरिक स्वयं सरोकारवाला हो । समुदाय, वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र, सामुदायिक मेलमिलाप समितिहरु छन् । महिला बालबालिका कार्यालयका समूह, समिति छन् । विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ सबैले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ । यो कुरा घरबाट शुरु हुनुपर्छ । राजनीतिक दलको प्रतिनिधि वा बुझेको व्यक्तिबाट हुनुपर्छ । हाम्रा कार्यालयहरुबाट हुनुपर्छ । यसरी सबै सरोकारवाला निकायको एकै खालको बुझाई भयो भने व्यक्तिले सजिलै न्याय पाउन सक्छ ।
प्रस्तुतिः यमुना खनाल